Dhijitari Remedy's Flip Inoita Kutenga, Kugadzirisa, Kugonesa, uye Kuyera Kupfuura-Iyo-Pamusoro (OTT) Kushambadzira Zviri Nyore | Martech Zone
Iko kuputika mukushambadzira midhiya sarudzo, zvemukati, uye kuona pamusoro pegore rapfuura zvagadzira Zvakanyanyisa (OTT) kushambadzira kusingakwanise kuregeredza mabhurandi uye vamiririri vanovamiririra.
Chii chinonzi OTT?
OTT inoreva kushambadzira midhiya masevhisi ayo anopa echinyakare kutepfenyura zvemukati mune chaiyo-nguva kana pane-kudiwa pamusoro peinternet. Izwi iri Zvakanyanyisa zvinoreva kuti mupi wezvemukati ari kuenda pamusoro peyakanyanya einternet services sewebhu kubhurawuza, email, nezvimwe.
Tambo-yekucheka iyo yakatanga zvine mutsindo pamberi denda racho rakurumidza kumhanyisa zvine fungidziro 6.6 mamirioni edzimba achicheka tambo gore rapfuura, zvichiita dzinenge chikamu chimwe muzvina chemhuri dzeAmerica dzisina tambo. Imwe 27% vanotarisirwa kuita zvakafanana muna 2021.
Nekutenderera ikozvino kuverengera kweanoda kusvika 70% yekutarisa kweTV, vateereri vazhinji vari kukwezva kutarisisa kubva kuvashambadzi. Kushandisa kushambadzira kweOTT kunotarisirwa kusvetuka kubva pamadhora mazana mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe nemakumi matatu kusvika pamazana mana emadhora mazana masere nemakumi mairi nemakumi mairi nemakumi maviri neshanu, ichikambaira zvishoma nezvishoma kusvika panzvimbo yepamusoro yeTV yekushandisa.
Kunyangwe paine mukana wakakura, kuitisa kushambadzira kweOTT kunogona kunetsa kune ese makuru uye madiki mabrandi nemaajensi. Nemapuratifomu akawanda, zvakaoma kuziva kuti ndeipi yaunofanira kusarudza. Kugadzirisa hukama nevaparidzi vakawanda kwakanetsa uye zvinogona kuve zvakaoma kuteedzera metrics chaiyo kuti uzive zviri kushanda uye chii chisiri.
Kugadzirisa dambudziko iri, Flip, mashandiro eOTT chikuva kubva kuDhijitari Remedy, inopa nzira yehungwaru yekutenga, kubata, uye kugadzirisa mishandirapamwe yeOTT. Asi kunze kwekungopedza mavhidhiyo emitengo, iyi Digiday yekuhwina mubairo-inopa mapuratifomu ane ruzivo rwakadzama nezvezvigadzirwa zvepamusoro-soro, geographies, vaparidzi, masikati, uye nezvimwe. Inopa izere-fanera kupiwa, kusimudzira mhando, uye kuwedzera kukwidziridzwa kusimudzira kuti vashambadziri vazive kwete chete kuti ndeapi macampaign ari kutyaira mhedzisiro (uye sei), asi anoisa izvi zviono kuti zvishande nekukasira, achigadzirisa mishandirapamwe mune chaiyo-nguva kune akasiyana ekuita-epamusoro. Iyo yakazara-sevhisi mhinduro inobata iyo yese OTT yekushambadzira lifecycle, ichigonesa mabhenji uye maajenzi eese saizi kuti vashandise pamukana weOTT neyakareruka.
Kunobva Kwakanangana Kubva kuPremiyamu Inventory
Kubudikidza nekudyidzana kwemaindasitiri, mabhenji uye vamiririri vanowana mukana wakananga kune wese muparidzi weOTT muparidzi kuwedzera vateereri kusvika. Iyo Flip papuratifomu inosimudza yakawanda yakafumisa dhata kune mafuta chaiwo-nguva optimization, kuve nechokwadi mushandirapamwe uri kuita kune kwavo kuzere kugona nepo ichipa zvakadzama nzwisiso uye ichiita zvakanyanyisa bhajeti yemushambadzi. Nekuti hapana wepakati, zvigadzirwa zvinowana mitengo inoshanda kwazvo inogoneka, kugadzira yakakwira ROI uye kudzoka pane kushambadzira kushandisa (ROAS). Uye nekuti zano rese reOTT rinotarisirwa mukati meFlip, hapana chikonzero chekunetsana nehukama hwevatengesi kana zvibvumirano. Zviri nyore, zvakasimbiswa, uye zvinoshanda.
Pima Zviito, Kwete Kungotarisa
Sezvo kuyerwa kweOTT kuchiri kuramba kuchikura, mabrandari anoda kutarisa kupfuura mavhidhiyo ekupedzisa mitengo (bhanari hongu / kwete), kudzvanya, uye kuratidza. Pakupera kwezuva, vashambadziri vanoda kuziva kuti kwavo mishandirapamwe iri kutyaira zviyero zvinoyerwa, uye pakupedzisira, kutengesa. Flip inokwanisa kubatanidza iwo madota, kuyera maKPI sekurodha pasi maapp Ipuratifomu inosunga maonero kune chaiko mhedzisiro yekushambadzira, kuti iwe ugone kuona zviri kushanda uye chii chisiri kushanda.
Ichi ndicho chimwe chezvinhu zvakakosha zvinoita kuti mhinduro yedu ive yakasarudzika-tinogona kusungira mhedzisiro kushambadziro uye kuzviita pamidziyo yega yega, kuti iwe uone izvo zviri kunyatsofambisa tsono. Izvi zvinoreva kuti iwe unowana chaicho, chiito chinonzwisisika kuti uite chinogadziriswa chinogadziriswa kumishandirapamwe ako kuti uwane zvinangwa zvako zvebhizimusi repazasi.
Michael Seiman, Dhijitari Remedy CEO
Rakazara Dhata reZvakadzama Nzwisiso
Vazhinji vatengesi vanokwanisa kuwana yavo yekutanga-bato data revatengi uye ndizvozvo-hapana nezve vako vanokwikwidza vatengi kana kunyange vangangove vatengi. NaFlip, unogona kuunza rako wega data uye wozvisanganisa neDhijitari Remedy's yakakura-yechitatu-bato dhata sosi uye wedzera iyi yakafararira dhata yakatarwa yakadzika, yakanatswa vateereri kunongedzera uye kuzivisa. Izvi zvinoreva kuti iwe unogona kuisa muhomwe pane ako makwikwi 'dhata kuti uwane zvirinani zvibodzwa.
Yechokwadi-nguva Brand Lift Mhedzisiro
Kunze kwekungoona chete uye kushoma-kushoma kwekushandurwa, Flip zvakare inobvumidza vashambadziri kuteedzera kusimudzira kwechiratidzo nekubatanidza OTT metric yekuita pamwe neongororo-yakavakirwa Insights kuyera kuziva, kuyeuka, uye kuona. Saka kunyangwe kune avo vasati vatendeuka, Flip inokutendera kuti utore kurovera pahukama hwechiratidzo kuti uone kana kushambadza kwako kuchikwirana nevateereri vako.
Tsvaga Izvo Chaizvo Chinotenderedza Tsono
Mukushambadzira kwedhijitari, kune akawanda misiyano inogona kuverengerwa kumushandirapamwe kubudirira. Ichokwadi ndechekuti, vateereri vanogona, uye vangangove, vachaburitswa kushambadziro dzako kune mamwe ma media chiteshi panguva imwe chete mumushandirapamwe weOTT. Hazvingave zvakanaka here kuratidza kuti ndeapi mativi emushandirapamwe ari chaizvo kutyaira mhedzisiro? NaFlip, mhando dzinogona kupindura mubvunzo: wevose vakatora matanho, vangani vavo vakaita saizvozvo nekuda kwekuratidzwa kweOTT zvakanyanya? Flip inopa zvakadzama zvinowedzera kusimudza metriki, kuyera uye kuratidza kuti ndeapi akasiyana emushandirapamwe wako anokanganisa zvakanyanya pane yako yepasi munzira yemutengi yekutenga. Iyo inopa chiyero chegranularity nekuparadzanisa mhedzisiro uye nekumisikidza kukosha kweOTT mukati memushandirapamwe wako wese. Nekufananidza mwero wekushandurwa kwemapoka akafumurwa uye ekudzora pamisiyano yakaita seyezvigadzirwa, vaparidzi, uye vateereri, isu tinokwanisa kuona kuti munhu angangoshandura zvakadii kana achizarurirwa kushambadziro yako paOTT kana zvichienderana nezvimwe mushandirapamwe.
Makumi emakore ehunyanzvi Padivi Rako
Muchina wakangochenjera sevanhu vari kumashure kwawo, uye timu iri paDhijitari Remedy yanga ichishanda muvhidhiyo neOTT kubvira usati watora chero chinhu. Nemakore anopfuura makumi maviri munzvimbo yedhijitari, vanga vachiita pamhando dzese dzenhau, kubvira kumashure apo pawaifanira kugadzirisa nemaoko. Uye pamwe nemakore angangoita mashanu munzvimbo yeOTT pachayo, ruzivo rwemasangano urwu runoreva kuti unowana tekinoroji-inofambiswa nedata inotsigirwa nehunyanzvi hwakadzama kubva kune nyanzvi dzakambove kune rimwe divi sevashambadziri pachadzo uye vanonzwisisa zvakadzama mamethriti ayo vashambadzi vanoda chaizvo kuona. Kufamba kwebasa, kuona, uye kuburitsa zvese zvakavakwa kubva mumaonero evatengi kuti vape ruzivo rwaunoda kuti unzwisise mashandiro emushandirapamwe.
Kusvetukira mune nyowani nyowani senge OTT kunogona kuita sekuremedza, kunyanya neyakawedzera kumanikidza kwekuziva kuti hauna chaicho sarudzo - ndipo pairi kuenda nevateereri vako nevakwikwidzi vako. Asi nematurusi akakodzera uye hunyanzvi mukona yako, kunyangwe zvigadzirwa zvidiki uye mafemu anogona kukwikwidzana nevakomana vakuru mune ino inopisa chiteshi. Iine Flip OTT mashandiro epuratifomu, Dhijitari Remedy iri kuita kuti iwanikwe, yakapusa, uye inodhura kumakambani nevashambadzi pamatanho ese kuhwina kuOTT.
Rongedza Demo reDhijitari Remedy Flip
Tags: adtechdigital mushongapafiripiipapoott ad kutengaott ad manejimendiott adsott kushambadzaott analyticsott mushandirapamwe manejimendiott mushandirapamweott mishandirapamweZvakanyanyisa
15-gore redhijitari Remedy veteran, Zapletal achangobatira saChief Innovation & Media Officer kweanopfuura gore mushure mekutanga kujoina kambani seEVP yeMedia Buying uye Optimization. Mune rake rekupedzisira basa, hunyanzvi hwaZapletal uye simba zvave zvakakosha mukusimudzira kwekuvhuvhuta Dhijitari Remedy's AdReady + uye Flip mhinduro, kwete chete mukutungamira zvikwata zvinoshanda uye zvakagoverwa asiwo kuunza ruzivo rwake pabasa rezvenhau patafura, pamwe nekunzwisisa kwake kwakadzama kwezvinodiwa nevatengi uye nemarwadzo.